लकडाउन व्यवसायीका लागि मात्र हो ? « Bazar Dainik
लकडाउन व्यवसायीका लागि मात्र हो ?
11 August, 2021 8:19 pm
सरकारले कोरोना महामारीको संक्रमणलाई हेरेर जिल्ला प्रशासनलाई लकडाउन वा निषेधाज्ञा गर्ने अनुमति दिइएको छ । झापालाई संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको जिल्लाको रुपमा हेरिएको छ ।
जिल्लाको शहर तथा गाउँ कोरोना महामारीको चपेटामा परेसँगै जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको बैठकले गत साउन १६ गतेदेखि लकडाउन लगाएको छ । नागरिकमा क्रमिक रुपले सबैक्षेत्र चलायमान बन्दै जाने, विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेका पेशाकर्मीको दिनचार्य चाँडै सहज हुने, आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने आशा रहेको थियो । तर, समय विपरीत चल्यो । चारै तिर विकारल स्थिति सिर्जना भयो र भइरहेको छ ।
लकडाउन कोरोना नियन्त्रणको प्रमुख उपाय बनेको छ । विश्व परिवेशमा यो नै महत्वपूर्ण विकल्पको रुपमा लिइएको पाइएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुका आपूर्ति सहज बनाउनु, कृषकका उत्पादित वस्तु बजारसम्म पु¥याउन हामी बीच ठूलो चुनौती सिर्जना भएको प्रष्टै छ । डिसीसीएमसीले गरेका निर्णय पालना गर्नु जिल्लाबासि सम्पूर्ण नागरिक र व्यवसायीको कर्तव्य हो ।
झापामा लकडाउन लगाइए पनि कोरोना नियन्त्रण हुन वा संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । भोलीका दिनमा अझ भयावह अवस्था सिर्जना हुँदैछ भन्ने ज्ञान अब जो कोहीलाई पक्कै छ । तर, पनि हामीमा रहेको अटेरीपन र निजी स्वार्थका कारण हामी घर–घरमा कोरोना पु¥याउने काम गरिरहेका छौँ । यहि स्थिति रहेमा अबका केही दिनमा हस्पिटल होइन प्रत्येक घर कोरोना हस्पिटलमा परिणत हुनेछ ।
सायदै जिल्लास्थित बिर्तामोड बजार र अन्य क्षेत्रका बजारमा फरक दृष्य देखिएको छ । लकडाउन भनिएको छ । तर, गाडीको आवतजावत, पैदल यात्री मालवाहक सवारी साधन, बैंकिङ् क्षेत्रमा भिड हेर्दा बिर्तामोड सामान्य लाग्नु स्वभाविकै हो । तर, पनि व्यापारी नै किन पटक–पटक पक्राउ पर्दछन् ? उनीहरु माथि किन ढण्ड जरिवाना गरिन्छ ? दोषी व्यापारी मात्र हुन् ? भिड बढाउन उनीहरु मात्र जिम्मेवार छन् ? बैंकिङ् क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, सडकमा निस्किएका नागरिकलाई किन कडाई गरिदैन ?
अहिले व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने, जरिवाना गर्ने विषयमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । हामीले बुझेको र डिसीसीएमसीले लगाएको लकडाउन सम्पूर्ण नागरिक र व्यवसायीलाई सम्मान तवरले लागू गरिनु पर्दछ । लकडाउनमा गरिएका कम्जोरी सच्याउन सबैपक्षले सहकार्य गर्न तयार हुनु पर्दछ । कम्जोरी सच्याउन साथै पुनः गल्ती नगर्ने गरी सचेत गराउनु हाम्रो दायित्व हो । यसका लागि हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ । तर, यो विषम परिस्थितिमा दण्ड र जरिवाना अन्तिम विकल्प होइन भन्ने ज्ञान सरोकारवालामा हुन आवश्यक छ ।
डिसीसीएमसी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा रहने भएकाले श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूलाई जिल्ला भित्र भएको घटनाको जानकारी छ या छैन । यदि जानकारी छ भने किन मौन ? डिसीसीएमसीको धारण यही हो या भुलवस यस्ता कार्य हुँदैछन् ? कि निर्देशित रुपमा भइरहेका छन् । यदि आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्य दोहोरिएमा त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिसीसीएमसीले लिने कि नलिने ? यस विषम परिस्थितिमा समस्या आउनेछन् । तर, जिल्ला प्रशासनको कदमले कोरोनाको चपेटामा रहेका व्यवसायीलाई थप निरासा बनाएको छ ।
कोरोना महामारी फैलिरहेको समयमा सम्पूर्ण उद्योगी व्यापारी र जनसमुदायमा आफू सजक भइ अत्तिवाश्यक काम मात्र गर्नुपर्ने अवस्था छ । कोरोनाको प्रकोप समाप्त नहुँदासम्म आफू बाच्ने र समाजलाई बचाउने आजको प्रमुख कर्तव्य हो । जीवन रहे व्यवसाय गर्ने, कमाउने, रमाइलो गर्ने गरौँला । आपूmलाई कोरोना लागे परिवार र समाजमा कति विचलन र असहज स्थिति पैदा हुन्छ भन्ने विषयमा अब आम नागरिक सचेत हुने समय आएको छ । त्यसैले आपूm पनि बाचौँ, अरुलाई पनि बचाऔँ ।